रोचक विविध Archives - Internet Khabar
फोनमा कुरा गर्दा सबैभन्दा सुरुमा भनिने शव्द ‘हेल्लो’ को सुरुवात कसले गर्यो होला ? किन अभिवादनका अन्य शव्दहरु हुँदाहुँदै पनि हेल्लो शव्दकै प्रयोग गरिन्छ होला टेलिफोन संवादमा ? वास्तवमा हेल्लो शव्दको आविष्कार मानिसहरुबीचमा आपसी कुराकानीलाई
एजेन्सी । एक पटक सोच्नुहोस् त तपाईले घरमा पाल्नु भएको कुकुरले तपाईको जवाफ तपाईकै भाषामा दिन सक्छ त ? तपाईलाई यस कुराले अचम्मिच बनाउन सक्छ। तर अब आश्चर्य नमान्नुहोस्, त्यो दिन टाडा छैन, अब मानिसले
हिन्दु धर्ममा मृत्युपछि गरुड पुराण सुन्ने परम्परा छ । यस पुराणमा भगवान् विष्णुले आफ्नो वाहन गरुडलाई मृत्युसँग सम्बन्धित अनेकौं गोप्य कुरा बताउनुभएको छ । मृत्युपछि जीवात्मा कसरी यमलोकतिर जान्छ भन्ने कुराको विस्तृत वर्णन गरुड पुराणमा
अहिले विश्वभर प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) सप्ताह चलिरहेको। ‘भ्यालेन्टाइन डे’को प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको छ । नेपालमा पनि युवा–युवतीहरु भ्यालेन्टाइन डेलाई विशेष रुपमा मनाउँछन्। भ्यालेन्टाइन डेको विशेषता हो, प्रेमी बनाउनु । यदि तपाईंले कसैलाई
दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले देखेका छौं। अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ। विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। फेमिली सिस्टम
विवाह अगाडि र पछाडिको सम्बन्ध उस्तै हो भन्ने सोच छ भने परिवर्तन गर्नुहोला । व्यक्ति एकै भए पनि विवाह अगाडि र पछाडिको सम्बन्धमा केही विषय परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तन हुने सम्बन्धसँगै व्यवहारसमेत परिवर्तन भयो भने
आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाको ब्लड ग्रुपबाटै थाहा पाउनुहोस् उसको स्वभाव
ब्लड ग्रुपले स्वास्थ्य अवस्थाको मात्रै होइन मानिसको स्वभावको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । क्यानेडियन नेचुरोपेथिक डाक्टर जेम्स डी एडमाओ र उनका छोरा पिटर डी एडमाओले गरेको
रिक्सा चढ्न भन्दा प्लेन चढ्न सस्तो !
आम सर्वसाधारणको यात्राको माध्यम भनेको बस, ट्याम्पु, रिक्सा आदि हुने गर्दछ । प्लेन चढ्ने त परै जाओस् त्यसमा यात्रा गर्ने सोच्न पनि सक्दैनन् सर्वसाधारणहरु । कसैले तपाईंलाई रिक्सा भन्दा प्लेन चढ्दा सस्तो हुन्छ भन्दा पत्याउनुु
एजेन्सी। केही व्यक्तिहरुले अनेकौं रोचक कुराहरु परीक्षण गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै केही कामहरु छन् जो हामीले सुन्दा सजिलै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तर ती कामहरु गर्न भने सकिँदैन । यस्ता ट्रिकहरु केही व्यक्तिले ख्याल गरेर
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, “म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी पक्षपाती हुँ। मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु ।” बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि